आशा गर्नु पर्ने कारण, विश्वव्यापी चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
पुरानो नियम निराश आशाको कथा हो। यो भगवानको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको थियो कि प्रकाशबाट सुरू हुन्छ। तर धेरै समय सम्म मानिसहरूले पाप गरे र स्वर्गबाट ​​निकालिए। तर न्यायको वचनको साथ वचनको वचन आयो - परमेश्वरले शैतानलाई भन्नुभयो कि ईवाको सन्तान मध्ये एउटाले उसको टाउको कुचोल्नेछ (संख्या ११:२:1)। एक मुक्तिदाता आउनेछ।
इभा सायद आशा गर्छिन् कि उनको पहिलो बच्चा समाधान हुन्छ। तर यो कयिन थियो - र ऊ समस्याको एक हिस्सा थियो। पाप जारी रह्यो र यो झन झन खराब हुँदै गयो। नूहको दिनमा आंशिक समाधान भएको थियो, तर पापको शासन जारी रह्यो। मानवतामा समस्याहरूको क्रम जारी रह्यो, केहि राम्रोको आशामा, तर यो प्राप्त गर्न कहिल्यै सक्षम भएन।
अब्राहमलाई केहि महत्वपूर्ण वाचाहरू दिइयो। तर सबै प्रतिज्ञाहरू प्राप्त गर्नु अघि उहाँ मर्नुभयो। उसको बच्चा थियो तर कुनै देश थिएन र ऊ सबै देशका लागि आशिष्‌ थिएन। तर वाचा बाँकी छ। यो पनि इसहाकलाई दिइयो, त्यसपछि याकूबलाई।
याकूब र उसको परिवार मिस्रमा बसाई सरे र एउटा ठूलो जाति भयो, तर तिनीहरू दास बने। तर परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो। उनले भगवान्लाई मिश्रदेशबाट अचम्मका चमत्कारहरूसहित बाहिर ल्याइन्।
तर इस्रायलीहरू यस प्रतिज्ञाबाट धेरै टाढा भए। चमत्कारले सहयोग गरेन। कानुनले सहयोग गरेन। तिनीहरूले पाप गर्न छोडे, तिनीहरू शंकामा लागिरहे, र desert० वर्षसम्म उजाडस्थानमा उनीहरूले यात्रा जारी राखे। तर परमेश्वर आफ्ना प्रतिज्ञाहरूप्रति दृढ रहनुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई कनानको प्रतिज्ञा गरिएको भूमिमा ल्याउनुभयो र धेरै चमत्कारमा उनीहरूलाई त्यो भूमि दिनुभयो।
तर त्यसले उनीहरूको समस्याहरू समाधान गरेन। तिनीहरू अझै पापी मानिसहरू थिए र न्यायको पुस्तकले हामीलाई सबैभन्दा खराब पापहरूको बारेमा बताउँदछ। परमेश्वरले अन्तमा अश्शूर मार्फत उत्तरी जनजातिहरूलाई बन्दी बनाउनुभयो। कसैले सोच्दछ कि यसले यहूदीहरूलाई पश्चाताप गरेको थियो, तर त्यो त्यस्तो थिएन। मानिसहरू बारम्बार असफल भए र तिनीहरूलाई कब्जा गर्न अनुमति दिए।
अब कसको वचन थियो? मानिसहरू अब्राहमको सुरू भएको ठाउँमा पुगे। यो प्रतिज्ञा कहाँ थियो? यो प्रतिज्ञा झूट बोल्न सक्ने परमेश्वरमा थियो। उसले आफ्नो वचन पूरा गर्‍यो, जनता असफल भए पनि।
भगवानले सब भन्दा सानो तरिकाबाट सुरू गर्नुभयो - कुमारीमा भ्रुणको रूपमा। यशैयाले भनेका थिए, म तिमीलाई एउटा चिन्ह दिनेछु। कुमारी कन्या गर्भवती हुनेछ र एउटा बच्चालाई जन्म दिनेछ र तिनीहरूलाई इम्मानुएल नाम दिइनेछ, जसको अर्थ हो "हामीसँग परमेश्वर"। तर उहाँ पहिले येशू हुनुभयो (येशुआ), जसको अर्थ हो "भगवानले हामीलाई बचाउनुहुनेछ"।
विवाहबाट जन्मिएको बच्चाको माध्यमबाट परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्न सुरु गर्नुभयो। यो एक सामाजिक कलंक संग सम्बन्धित थियो - तीस वर्ष पछि पनि यहूदी नेताहरूले येशूको उत्पत्ति बारेमा अपमानजनक टिप्पणी गरे (यूहन्ना १:8,41:१) स्वर्गदूतहरू र अलौकिक अवधारणाको बारेमा मरियमको कथा कसले विश्वास गर्ने थियो?
परमेश्वरले आफ्ना जनहरूका आशाहरू त्यस्तो तरिकाले पूरा गर्न थाल्नुभयो जुन उनीहरूले चिन्दैनन्। कसैले पनि अनुमान गरेका थिएनन् कि यो "अवैधानिक" बच्चा देशको आशाको उत्तर हो। बच्चाले केही गर्न सक्दैन, कसैले सिकाउन सक्दैन, कसैले सहयोग गर्न सक्दैन, कसैले बचत गर्न सक्दैन। तर बच्चाको सम्भाव्यता हुन्छ।
स्वर्गदूतहरू र गोठालाहरूले बेतलेहेममा एक मुक्तिदाता जन्म भएको रिपोर्ट गरे (लूका १:१:2,11)। उहाँ एक मुक्तिदाता, एक मुक्तिदाता हुनुहुन्थ्यो, तर त्यस समयमा उसले कसैलाई पनि बचाएन। ऊ आफैले पनि आफूलाई बचाउनु परेको थियो। यहूदीहरूको राजा हेरोदको छोरोलाई बचाउन परिवार भाग्नुप .्यो।
तर परमेश्वरले यो असहाय बच्चालाई उद्धारकर्ता भन्नु भयो। उसलाई थाहा थियो कि यस बालकले के गर्छ। इस्राएलका सबै आशाहरू यस बच्चामा थिए। यहाँ अन्यजातिका लागि ज्योति थियो; यहाँ सबै जातिहरूका लागि आशिष् थियो। यो संसारको शासन गर्ने दाऊदको छोरो थियो। यहाँ हव्वाको छोरा थियो जसले सारा मानिसजातिको शत्रुलाई नष्ट गर्थे। तर ऊ केवल बच्चा मात्र हो, स्थिरमा जन्मेको थियो, उसको जीवन जोखिममा थियो। तर उनको जन्म संग सबै परिवर्तन भयो।
येशू जन्मनुहुँदा त्यहाँ अन्यजातिका मानिसहरूलाई यरूशलेममा सिकाउन आउँदैनथ्यो। कुनै राजनैतिक वा आर्थिक बलको चिन्ह थिएन - कुमारी कन्याले बच्चा र बच्चा जन्माएको बाहेक अरू कुनै चिन्ह देखिएन - यो चिन्ह जुन यहूदाका कसैले पनि विश्वास गर्दैनन्।
तर परमेश्वर हामीतर्फ आउनुभयो किनकि उहाँ आफ्ना प्रतिज्ञाहरूप्रति वफादार हुनुहुन्छ र हाम्रो सबै आशाको आधार उहाँ हुनुहुन्छ। हामी मानव प्रयासको माध्यमबाट परमेश्वरका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौं। भगवानले सोच्न सक्ने तरिकाले गर्नुहुन्न, तर उहाँ कामहरू जान्नुहुन्छ भनेर। हामी कानून र देश र यो संसारको राज्य जस्ता सर्तहरूमा सोच्दछौं। परमेश्वर सानाको श्रेणीमा सोच्नुहुन्छ, प्रारम्भिक सुरुवात, शारीरिक शक्ति भन्दा आध्यात्मिक, शक्तिको सट्टा कमजोरीमा विजय।
जब परमेश्वरले हामीलाई येशू दिनुभयो, उहाँले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्नुभयो र उनले भनेका सबै पूरा गर्नुभयो। तर हामीले अहिले पूरा भएको देख्न सकेनौं। धेरै मानिसहरूले यसलाई विश्वास गरेनन्, र विश्वास गर्नेहरूले केवल आशा मात्र गर्न सक्थे।
हामीलाई थाहा छ कि येशू हाम्रो पापको निम्ति फिरौतीको रूपमा आफ्नो जीवन दिन, हामीलाई क्षमा दिन, अन्यजातिहरूका लागि ज्योति हुन, शैतानलाई हराउन, र मृत्युलाई आफैंले मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा पराजित गर्न हुर्कनुभयो। येशू कसरी परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूको पूर्ति हुनुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौं।
हामी यहूदीहरूले २,००० वर्ष पहिले देखेको भन्दा बढी देख्न सक्दछौं, तर हामी अझै त्यहाँ सबै देख्दैनौं। हामी अझै देख्न सक्दैनौं कि हरेक प्रतिज्ञा पूरा भएको छ। हामीले शैतानलाई बाँध्न सकेको छैन र अब उसले मानिसहरूलाई लोभ्याउन सक्तैन। हामी अझै देख्न सक्दैनौं कि सबै मानिसहरूले परमेश्वर जान्दछन्। हामीले अझै पुकार, आँसु, पीडा, मृत्यु र मृत्युको अन्त्य देख्दैनौं। हामी अझै अन्तिम उत्तरको लागि उत्सुक छौं - तर येशूमा हामीसँग आशा र निश्चितता छ।
हामीसँग एउटा प्रतिज्ञा छ जुन परमेश्वरले उनको पुत्र मार्फत ग्यारेन्टी गर्नुभयो, जुन पवित्र आत्माले मोहर लगाएको छ। हामी विश्वास गर्दछौं कि अरू सबै कुरा साकार हुनेछ, कि ख्रीष्टले शुरू गर्नुभएको काम पूरा गर्नुहुनेछ। हामी विश्वस्त हुन सक्छौं कि सबै प्रतिज्ञाहरू पूरा हुनेछन् - हामीले आशा गरे जस्तो गरी हुँदैन, तर परमेश्वरले योजना गर्नुभएको तरिकामा।
उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएझैं आफ्नो छोरा येशू ख्रीष्टमार्फत गर्नुहुनेछ। हामी अहिले यसलाई हेर्न चाहँदैनौं, तर भगवानले काम गरिसक्नुभयो र परमेश्वरले आफ्नो इच्छा र योजना पूरा गर्न पर्दा पछाडि पनि काम गरिरहनुभएको छ। जसरी हामीसित एउटा बच्चाको रूपमा येशूमा आशा र मुक्तिको प्रतिज्ञा थियो, त्यसरी नै अब बौरिउठ्नुभएका येशूमा हामीसँग आशा र पूरा हुने प्रतिज्ञा छ। हामीसँग पनि परमेश्वरको राज्यको वृद्धि, चर्चको काम र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको आशा छ।
जब मानिसहरूले विश्वास गर्न थाल्छन्, तब उहाँहरूको काम तिनीहरूमा बढ्न थाल्छ। येशूले भन्नुभयो कि हामी नयाँ गरी जन्मनुपर्दछ र जब हामी विश्वास गर्छौं पवित्र आत्माले हामीलाई ओझेलमा पार्नुहुन्छ र हामीमा नयाँ जीवन सिर्जना गर्नुहुन्छ। येशूले प्रतिज्ञा गरेझैं उहाँ हामीमा बस्न आउनुहुन्छ।
कसैले एकचोटि भनेका थिए: "येशू १००० मलाकीको जन्म हुन सक्नुहुन्थ्यो, र ऊ ममा जन्मेको भए यसले मलाई सहायता गर्ने थिएन।" येशूले संसारमा ल्याउनुहुने आशाको केही काम हुँदैन जबसम्म हामी उहाँलाई हाम्रो आशाको रूपमा स्वीकार गर्दैनौं। हामीले येशू हामीमा बस्न दिनुपर्दछ।
हामी आफैंलाई हेर्न र सोच्न चाहन्छौं: «म त्यहाँ धेरै देख्दिन। म २० बर्ष भन्दा पहिले भन्दा राम्रो छैन। म अझै पनि पाप, शंका र दोषी संग संघर्ष गर्दछु। म अझै पनि स्वार्थी र जिद्दी छु। म ईश्वरीय मानिस हुनु भन्दा धेरै राम्रो छैन पुरानो इस्राएलका भन्दा थियो। भगवानले मेरो जीवनमा केहि गर्दै हुनुहुन्छ भने मलाई आश्चर्य लाग्छ। यस्तो देखिदैन कि मैले कुनै प्रगति गरेको छु। »
यसको जवाफ येशूलाई सम्झनु हो। हाम्रो आध्यात्मिक नयाँ सुरुवातले अहिलेको समयमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सक्दैन - तर यो गर्‍यो, किनकि भगवानले त्यस्तै भन्नुहुन्छ। हामीमा के छ हामी मात्र तल भुक्तानी छ। यो एक शुरुआत हो र यो आफै परमेश्वरबाटको ग्यारेन्टी हो। पवित्र आत्माले तल आउनु भएको महिमाको तल भुक्तानी गर्नुभयो।
येशूले हामीलाई भन्नुभएको छ कि पापी रूपान्तरण हुँदा स्वर्गदूतहरूले सबै मलाकीलाई जयजयकार गर्छन्। तिनीहरूले ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने प्रत्येकको बारेमा गाउँछन् किनभने एउटा बच्चा जन्मेको थियो। यो बच्चाले महान कार्यहरू नगर्न सक्छ। त्यहाँ स strugg्घर्ष हुन सक्छ, तर यो भगवानको बच्चा हो र परमेश्वरले देख्नुहुनेछ कि उसको काम सकियो। उसले हाम्रो ख्याल राख्छ। हाम्रो आध्यात्मिक जीवन सिद्ध नभए पनि, उहाँ आफ्नो काम पूरा नभएसम्म हामीसँग काम गरिरहनुहुनेछ।
जसरी एउटा बच्चाको रूपमा येशूमा ठूलो आशा छ, बच्चा ईसाईहरूमा पनि ठूलो आशा छ। तपाईं ईसाई भएको कति लामो समय भए पनि, तपाईंको लागि ठूलो आशा छ किनकि परमेश्वरले तपाईंमा लगानी गर्नुभयो - र उसले सुरु गरेको काम छोड्नेछैन।